Tesla မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပညာအရည်ချင်းမလိုဘူး ပြောလိုက်တဲ့ CEO Elon Musk - PX
နည်းပညာတွေ အရမ်းတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ပညာအရည်အချင်း မကန့်သတ်ထားတဲ့ အလုပ်ရယ်လို့ မရှိဘူး၊ မကြားဘူးပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တောင် အနိမ့်ဆုံး ပညာအရည်ချင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှ အလုပ်ရနိုင်ချေရှိတယ်။
ဒါတောင် Possiblity ဖြစ်နိုင်တာကိုပဲ ပြောသေးတာနော်၊ နောက်မှာ ဘယ်လောက် အတွေ့ကြုံရှိလဲ မေးခွန်းမျိုးက တက္ကသိုလ်ပြီး ဘွဲ့ရခါစ လူငယ်တွေ မကြားချင်မှအဆုံး။ ဝင်ငွေကောင်းပြီး အဆင့်မြင့်မြင့် ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဘယ်အချိန် ၊ ဘယ်အခါ ဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စမှန်း မသိသလိုပါပဲ။
အလုပ်ရဖို့ မခက်ဘူး (ရှာရင်ရှိတယ်) ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်နဲ့ မကိုက်တာ (ဝင်ငွေ ၊ သင့်တော်တာ) လေးပဲ ရှိတာမို့ Elon Musk သာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အခွင့်ရေးပေးရင် ကောင်းမှာပဲလို့ အတွေးဝင်မှာပါ (နောက်တာပါ)
Tesla ကုမ္ပဏီမှာ ဝင်လုပ်ဖို့ ပညာအရည်ချင်းမလို (တက္ကသိုလ်ဘွဲ့တစ်ခုခုနဲ့ အထက်တန်း ဒီပလိုမာဘွဲ့) ဘူးဆိုတော့ (ဝင်လုပ်ရင်ကောင်းမလား) ဘာကြောင့် ဒီစကားပြောတာလည်း သိချင်မယ် ထင်ပါတယ်။
Elon Musk အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်းပြောရရင် Standford တက္ကသိုလ်မှာ Energy Physics/ Materials ဆိုင်ရာ သိပ္ပံဘာသာရပ် Ph.D. ဘွဲ့လွန်ပညာ ဆည်းပူးနေရာကနေ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ကျောင်းထွက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းထွက်ပြီးချင်း နောက် ၂ ရက်မှာ Zip2 အမည်ရ Software လိုင်စင်ကုမ္ပဏီကို အစ်ကိုဖြစ်သူ Kimbal Musk နဲ့ ပူးတွဲ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၄ နှစ်အကြာ Zip2 ကို Compaq (HP) က ဒေါ်လာ သန်း ၃၄၀ နဲ့ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း အွန်လိုင်းဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ X.com (ယခု PayPal) ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
CEO Elon Musk Unvelis Tesla Cybertruck November 21, 2019 (Photo The Verge)
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မှာ အမေရိကန် Software ကုမ္ပဏီ Confinity Inc. နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး PayPal ဝန်ဆောင်မှု စတင်ခဲ့ကြတယ် (၂၀၀၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလမှာ PayPal ကို ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံနဲ့ eBay ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်)
၂၀၀၂ ခုနှစ် မေလမှာတော့ အာကာသ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီဖြစ်လာတဲ့ SpaceX ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အာကာသသိပ္ပံဆိုင်ရာ နည်းပညာပစ္စည်းတွေလည်း ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ SpaceX မှာ CEO အဖြစ် ဦးဆောင် တာဝန်ယူနေချိန် Tesla Inc ကို Elon Musk ထောက်ပံ့ငွေ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ Martin Eberhard ၊ Marc Tarpening တို့နဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
SpaceX CEO Elon Musk unveils The Dragon V2, May 29, 2014, in Hawthorne, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် အသုံးပြု နည်းပညာကို သဘောကျခဲ့တဲ့အတွက် SolarCity ကို Tesla အကျိုးပြု ကုမ္ပဏီအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွေမှာတော့ ဥာဏ်ရည်တု (Artificial Intelligence A.I) နည်းပညာကို သုတေသနပြုဖို့ OpenAI နဲ့ NeruaLink တွေကို ဖန်တီးခဲ့တယ်။
၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလမှာ The Boring Company ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၄၄.၅ ဘီလီယံ အသားတင်ကြွယ်ဝမှုနဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုဖော်ပြတာတွေ ထောက်ကြည့်ရင် Elon Musk ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အတွေ့ကြုံနဲ့ Life Event တွေက မနည်းဘူး။
Tesla Motors CEO Elon Musk unveils the new Model S at the Tesla factory in Fremont, California October 1, 2011. (Image Credit: Stephen Lam – Reuters)
ဒီအချက်တွေနဲ့တင် အသက် ၄၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Elon Musk က “Tesla နဲ့ ပူးပေါင်းလည့်ပါ“လို့ သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပြီး Tesla A.I အဖွဲ့က “သူ့ကို တိုက်ရိုက် Report တင်ရတယ်” လို့လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ကိုင်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း “Ph.D. ဘွဲ့ရ စရာမလိုဘူး၊ အဓိကလိုအပ်မှာက A.I နဲ့ ပတ်သက်လို့ နှံ့နှံ့စပ်စပ် နားလည်ထားဖို့လိုတယ်၊ Neural Networks (NN) နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ဘယ်လို Implement လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ သိထားရမယ်။ ဒီအရည်ချင်းတွေ ရှိထားရင် ဘွဲ့ရရ မရရ ငါဂရုမစိုက်ဘူး” လို့ Twitter မှာ မေးမြန်းထားတာတွေကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ Tesla ရဲ့ Hardcore Coding Test မှာလည်း စစ်ဆေးခံရဦးမယ်လို့ ရွေးချယ်ခံ Candidate တွေအတွက် ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ် ဒါမှမဟုတ် အထက်တန်း ပညာရေး မရှိလည်း အလုပ်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာ Elon Musk အဓိက ဆိုလိုရင်း မဟုတ်ဘူးပါဘူး။
နားလည်အောင် ပြောရရင် ဘွဲ့မရလည်းနေ၊ ဂျွတ် (Skill) ဖို့ပဲလိုတယ် လို့ ခေတ်စကားပြောနိုင်သလို ပညာသား ပါပါပြောရရင် Tesla ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဗဟုသုတ ၊ အရည်အချင်းတွေကို မင်းတို့ တက္ကသိုလ်၊ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ဆည်းပူးခဲ့တဲ့ ပညာရပ်နဲ့ Equal ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်တယ်ဆိုရင် လာခဲ့ပါ လို့ သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တမျိုးဖြေကြားရရင် ကျောင်းမှာ သင်လိုက်တဲ့ ပညာရပ်တွေဆိုတာ လက်တွေ့ဘဝမှာ သီအိုရီ ၊ အသိပညာတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြေရှင်းရသူနဲ့ ဝါးပြီးသား ထမင်းစားခဲ့ရသူ ၂ ယောက် (စာတွေ့နဲ့ လက်တွေ့ ကွာသလို) ကွာသလိုပါပဲ။
Elon Musk က ဘွဲ့မရလည်း Tesla နဲ့ပူးပေါင်းနိုင်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်အရည်ချင်း စစ်၊ မစစ်ကို စားမေးပွဲစစ်၊ ဥာဏ်စမ်းတဲ့ သဘောပါ။ Musk ကို ၂၀၁၄ မှာ အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ German Automotive မဂ္ဂဇင်း ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်လည်း ဘွဲ့မရ၊ ပညာမတတ်လည်း အရေးမကြီးဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သဘောကတော့ ထူးချွန်သူ ၊ ပါရမီရှိသူ Elon Musk မှ မဟုတ်ဘဲ Apple ပဲ့ကိုင်ရှင်ကြီး Steve Jobs ၊ Microsoft ဘိုးအေကြီး Bill Gates တို့တတွေလည်း ဘွဲ့မရသူတွေပါ။ ဒီလူတွေ ပြောတဲ့စကားက နားခံတတ်ရင် အဖိုးထိုက်ပြီး နားယောင်သွားရင် ခွေးဖြစ်မယ့်ကိန်းလို့ပဲ သုံးသပ်ရမှာပါ။
Credit: Jagmeet Singh (Gadgets 360)